Izinsiza kusebenza ze-high-Quality Cold cardioplegic perfusion zefektri yokusetshenziswa okukodwa nabakhiqizi | Sanxin
Ama-apparatus we-Cold cardioplegic solution perfusion wokusebenzisa okukodwa
Lolu chungechunge lwemikhiqizo lusetshenziselwa ukupholisa igazi, ukufakwa kwesixazululo esibandayo senhliziyo kanye negazi elinomoya-mpilo ngesikhathi sokuhlinzwa kwenhliziyo ngaphansi kombono oqondile.
Yakhiwe yidivayisi ye-thermostatic, ingxenye yokugcina amanzi kanye nepayipi lepompo elinamandla amakhulu we-1000ml.
Lo mkhiqizo ulungele amamodeli ahlukahlukene, ungasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene zesilinganiso se-perfusion.
Inezici zokusetshenziswa okuguquguqukayo, ukusebenza okushisa okuqinile okuguqukayo, uketshezi oluncane lwensimbi, umfutho omncane wokungena nokucindezela.
Idivayisi yokumnika uketshezi lwe-Myocardial
Inhliziyo iyisitho esisebenza kakhulu sokunyakaza komzimba womuntu, esinomthwalo osindayo nokusetshenziswa okukhulu komoya-mpilo, okunikeza amandla okujikeleza kwegazi okuhlelekile futhi akukwazi ukumiswa umzuzwana.
Idivayisi ingasetshenziselwa ukuboshwa kwe-cardiopulmonary kanye nokwenza ngcono i-myocardial ischemia ne-hypoxia lapho kusakazwa ukujikeleza kwegazi ngaphandle kwegazi ngokuhlinzwa kwenhliziyo okuvulekile.
Into No / Ipharamitha 70110 70210 70310
Isitoreji esikhulu segazi 1000 ml 200ml 200ml
Ukugcinwa kwamanzi ngeqhwa 1800 ml ≥ 2000 ml ≥ 2000 ml
Lokukhipha ubukhulu 1/4 (ϕ 6.4) 1/8 (ϕ 3.2) 1/8 (ϕ 3.2)
Umthamo ubukhulu ϕ 26, 6% isixhumi sangaphakathi se-luer / /
Ithempelesha yokulinganisa ububanzi ϕ 7 / /
Ice engeza ububanzi 115 mm ≥ 250 mm ≥ 250 mm
I-Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd ibhizinisi lobuchwepheshe locwaningo nentuthuko, ukukhiqiza nokuthengisa. Imikhiqizo yochungechunge lwezinhlinzeko ze-Cardiothoracic kufaka phakathi (Isihlungi seGazi Microembolus, Igazi Isitsha nesihlungi, Izinsiza kusebenza zeCold Cardioplegic Solution Perfusion, I-Disposable Extracorporeal Circulation Tubing Kit). Imikhiqizo ewuchungechunge edayisa umhlaba wonke ezibhedlela eziningi, isetshenziselwa izibhedlela kanye nabahlengikazi abangaphezu kuka-300. Ikhwalithi yemikhiqizo yethu iphakathi kokuhamba phambili embonini yezokwelapha, futhi sinegama elihle phakathi kwamakhasimende ethu.
Inkampani yethu inamalungelo amakhulu ezobuchwepheshe nemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme. Ifektri yethu iyisitshalo esihle sokukhiqiza imikhiqizo yochungechunge lwe-cardiothoracic china china.
Langaphambilini Ukuphefumula kwe-KN95
Olandelayo: Uhlobo lokuphepha ingcindezi ye-IV enhle
Isiqukathi segazi nesihlungi sokusetshenziswa okukodwa
Isihlungi segazi le-microembolus sokusetshenziswa okukodwa
Alahlwayo extracorporeal kwegazi tubing ki ...